Uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi)
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJan 12, 2021.
Yintoni uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi)?
Uxinzelelo lwegazi lunamacandelo amabini:
Uxinzelelo lwe-Systolic lelona nani liphezulu. Imele uxinzelelo oluveliswa yintliziyo xa ibetha ukumpompa igazi kuwo wonke umzimba.
Uxinzelelo lwe-diastolic linani elisezantsi. Ibhekisa kuxinzelelo kwimithambo yegazi phakathi kokubetha kwentliziyo.
Uxinzelelo lwegazi lulinganiselwa kwiimilimitha zemekyuri (mm Hg). Ke uxinzelelo lwegazi luya kubonakaliswa, umzekelo, njenge-120/80 mm Hg.
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu lufunyaniswa xa elinye okanye omabini la manani ephezulu kakhulu. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu lukwabizwa ngokuba ngumfutho wegazi ophezulu.
Kumashumi eminyaka, uxinzelelo lwegazi oluphezulu lwaluchazwa njenge-140/90 mm Hg. Ngo-Novemba, i-2017, izikhokelo ezitsha zase-United States zehlisa umqobo wokufumanisa imeko. Ngokwezikhokelo ezitsha, nabani na ofunda i-130/80 mm Hg okanye ngaphezulu unexinzelelo lwegazi. Ngokusekwe kule nkcazo intsha, phantse isiqingatha samaMelika ngoku siwela kweli qela.
Uxinzelelo lwegazi ngoku luhlelwe ngolu hlobo lulandelayo:
Ngokwesiqhelo: Ngaphantsi kwe-120/80 mm Hg
Ukuphakama: 120/80 ukuya ku-129/79 mm Hg
Isigaba 1 soxinzelelo lwegazi: 130/80 ukuya kwi-139/89 mm Hg
Isigaba 2 soxinzelelo lwegazi: 140/90 mm Hg nangaphezulu
Nangona uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunokubangela iimpawu ezinjengeentloko kunye nokubetha kwentliziyo, kuhlala kungabangi zimpawu kwaphela.
Ke kutheni uzikhathaza ngoxinzelelo lwegazi oluphezulu? Kuba nokuba uxinzelelo lwegazi oluphezulu alubangeli zimpawu, lunokwenzakalisa amalungu amaninzi ngokuthe cwaka, kubandakanya:
Imithambo yegazi emzimbeni wonke
Awunakuwubona umonakalo oye wenziwa ngumfutho wegazi ophezulu emzimbeni wakho de ngokukhawuleza uhlaselwe sisifo esikhulu. Umzekelo, uxinzelelo lwegazi lonyusa umngcipheko wokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ukubetha, kunye nokusilela kwezintso.
Ngokwesiqhelo, uxinzelelo lwegazi alubangeli ngqo iimpawu. Xa uxinzelelo lwegazi luphezulu kakhulu, kunokubangela:
Ukuchongwa koxinzelelo lwegazi kuxhomekeke kufundo loxinzelelo lwegazi. Ke ngoko, kubalulekile ukuba uxinzelelo lwegazi lilinganiswe ngononophelo.
Unobangela isicaphucaphu ngaphandle kokugabha
Ukufumana imilinganiselo yoxinzelelo lwegazi oluchanekileyo:
Gwema oku kulandelayo kangangeyure enye ngaphambi kokuba uxinzelelo lwegazi lwakho luthathwe:
Ukusela iziselo ezine-caffeine
Hlala phantsi ubuncinci imizuzu emihlanu ngaphambi kokuba kufundwe.
Musa ukuthetha ngelixa uxinzelelo lwegazi lilinganiswa.
Ukufundwa kabini kufuneka kurekhodwe kwaye kwenziwe i-avareji.
Ukuba uxinzelelo lwegazi luphezulu, ugqirha wakho kufuneka ahlole amehlo akho, intliziyo, kunye nenkqubo yovalo, ukukhangela ubungqina bomonakalo wegazi.
Ukuba abukho obo bungqina, kuya kufuneka ubuye ubuncinci ngaphezulu kwemilinganiselo yoxinzelelo lwegazi. Kuphela kuxa ugqirha ekufumanisa ukuba unexinzelelo. Kungenxa yokuba ufundo olunye oluphezulu lunokwenzeka nakubani na.
Ukuba ufunyaniswe unesifo soxinzelelo lwegazi, ezinye iimvavanyo ziya kujonga ukonakala komzimba. Olu vavanyo lunokubandakanya:
Uvavanyo lwegazi ukujonga ukusebenza kwezintso
I-electrocardiogram (EKG) yokukhangela:
Ukutyeba kwezihlunu zentliziyo
I-x-ray yesifuba ukujonga:
Ulwakhiwo lwamanzi emiphungeni ngenxa yokusilela kwentliziyo
Ukuthintela uxinzelelo lwegazi oluphezulu:
Yenza umthambo rhoqo
Nciphisa ukungenisa kwakho ityuwa kunye neziselo ezinxilisayo
Yitya ukutya okunotye iziqhamo kunye nemifuno kunye namafutha asezantsi
Gcina ubunzima bomzimba obunqwenelekayo
Uxinzelelo lwegazi lonyusa umngcipheko wokuhlaselwa sisifo sentliziyo kunye nokufa icala. Ke kubalulekile ukuba uhlengahlengise imeko yomngcipheko wesifo somthambo. Ukongeza kwezi zenzo zingasentla, kuya kufuneka:
Nciphisa i-cholesterol yakho ephezulu ye-LDL (embi)
Unokwazi ukunyanga uxinzelelo lwegazi kunye notshintsho kwindlela yokuphila wedwa. Ukutshintsha nje into oyityayo noselayo kunokuhlisa uxinzelelo lwegazi ngamanqaku ayi-11, ngokokutsho koqikelelo oluthile.
Uxinzelelo lwegazi oluphakamileyo. Ukuba uxinzelelo lwegazi luphakanyisiwe, oko kuthetha ukuba inani lokuqala (uxinzelelo lwegazi lwe-systolic) liwela ku-120 ukuya ku-129 ngelixa inani lesibini (uxinzelelo lwegazi diastolic) lihlala lingaphantsi kwe-80, amayeza awanconyelwa. Endaweni yoko, kuya kufuneka ujolise kwiinguqu kwindlela yokuphila esempilweni:
Ukutya okuphezulu kwiziqhamo kunye nemifuno
Ityuwa encinci kunye namafutha agcweleyo
Ukwehla kobunzima ukuba utyebe kakhulu
Ukunciphisa utywala kwixabiso eliphakathi
Isigaba 1 soxinzelelo lwegazi. Unenqanaba 1 loxinzelelo lwegazi ukuba uxinzelelo lwegazi lwe-systolic luyi-130 ukuya kwi-139, uxinzelelo lwakho lwe-diastolic ngama-80 ukuya kuma-89, okanye zombini. Nokuba uxinzelelo lwegazi lwakho luhamba ngaphezulu kwe-130, awusayi kuludinga unyango kwangoko. Ugqirha wakho unokucebisa uvavanyo lokutshintsha indlela ophila ngayo kuqala ukuba awunasifo sentliziyo kwaye unomngcipheko ophantsi wokukuhlakulela kule minyaka ilishumi izayo. Kodwa abantu abaninzi bafumanisa ukuba kufuneka bathathe uhlobo oluthile lwamayeza ukuze banciphise amanani oxinzelelo lwegazi ukuya kumanqanaba asempilweni.
Isigaba 2 soxinzelelo lwegazi. Unesigaba 2 soxinzelelo lwegazi ukuba uxinzelelo lwakho lwe-systolic ubuncinci yi-140 mm Hg, uxinzelelo lwakho lwe-diastolic ubuncinci yi-90 mm Hg, okanye zombini. Ukongeza kwiinguqulelo kwindlela yokuphila, kuya kufuneka ukuba uqale amayeza ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Oko akuthethi ukuba uyakuhlala ufuna unyango lweziyobisi. Ukuphulukana nobunzima, ukunciphisa uxinzelelo, ukutya okusempilweni, kunye nokwenza umthambo yonke imihla kunokubangela ukufundwa kwakho kuluhlu oluqhelekileyo. Kodwa nokuba usafuna amayeza, iinzame zakho zokuphila zikunceda ekuthinteleni ekufuneni iidosi eziphezulu kwixesha elizayo.
Amayeza okunyanga uxinzelelo kubandakanya:
Iibhlokhi zesitayile seCalcium
Abantu abanesifo seswekile, isifo sezintso okanye iingxaki zentliziyo basemngciphekweni omkhulu wokuba neengxaki zoxinzelelo lwegazi. Ngenxa yoko, bahlala bephathwa gadalala ngakumbi ngamayeza.
Abantu abadala kufuneka uvavanyo lwegazi lwabo lilinganiswe ubuncinci rhoqo kwiminyaka embalwa.
Ukuba uxinzelelo lwegazi ngu-120/80 mm Hg okanye ngaphezulu, cwangcisa ukuqeshwa rhoqo nogqirha wakho. Ngaba uxinzelelo lwegazi lubekwe esweni rhoqo. Kwaye ufumane iingcebiso malunga nokuguqula indlela ophila ngayo ukukhusela iingxaki ezizayo.
Ukuxelwa kwangaphambili koxinzelelo lwegazi kuxhomekeke:
Kude kube nini unayo
Ukuba unezinye iimeko (ezinjengesifo seswekile) ezonyusa umngcipheko weengxaki
Uxinzelelo lwexinzelelo kunokukhokelela kwisifo esibi nokuba awunazo iimpawu.
Xa uxinzelelo lwegazi oluphezulu luphathwa ngokufanelekileyo, isifo sisengcono kakhulu. Zombini ezi nguqulelo kwindlela yokuphila kunye namayeza anokulawula uxinzelelo lwegazi.
Umbutho wentliziyo yaseMelika
ukufaka umhla kwigama 2010
indlela yokufumana uxinzelelo oluphambili
ingakanani ilorazepam yokuphakama
Zeziphi iimiligram ezingenayo i-flexeril engenayo